Suuqyada Boosaaso oo laga dareemayo u diyaar garowga maalinta ciida+sawiro – SBC
Suuqyada Boosaaso oo laga dareemayo u diyaar garowga maalinta ciida+sawiro
Posted by Webmaster on August 13, 2012 Comments
Dadka ku nool magaalada boosaaso iyo nawaaxigeeda ayaa waxa ay ka dukaamaysanayaan suuqyada boosaaso kuwaasoo ugu diyaargaroobaya maalinta ciidul fidriga xilli ay ka harsan tahay maalmo yar.
Waalidiin iyo caruur is daadahsanaya ayaa buux dhaafiyay wadooyinka iyo goobaha laga galo suuqyada boosaaso iyagoo markaasi ka adeeganaya goobaha ganacsi ee lagu iibiyo dharka kabaha iyo waxyaabaha ay caruurta ku ciyaaraan .
Xasan Cali Xaydar oo ah ganacsade iibiya dharka iyo kabaha oo markaasi ku sugnaa meheradiisa oo ku taal suuqa Gaaca ama dhabarka danbe ee xarunta dawlada hoose boosaaso ayaa SBC u sheegay in suuqoodu uu yahay mid dadka soo jiidanaya dhinac walba.
Cabdiraxmaan Saciid oo isna markaasi ku sugnaa carwada loo yaqaan Calasicco ee bartamaha magaalada boosaaso ayaa isna sheegay in carwadooda laga heli karo wax walba oo ku aadan labiska dhalinta caruurta iyo odoyaasha.
Maxamed Bulsho oo isna ku haysta suuqa carwada Bulsho ayaa isna sheegay in dadka adeeganaya iyo macaamiisha ay ugu bishaaraynayaan qiimo jaban iyo dhar tayo leh.
Sidoo kale waxaa warbaahinta SBC u waramay Khadar Cabdi Cali oo isna ka mid ah Ganacsatada suuqa Gaaca oo sheegay in isbedel buuxda laga dareemayo suuqooda gaar ahaan Qiimaha wax lagu iibsanayo.
Ugu danbayntii waxaa u diyaar garowgan uu ku soo beegmayaa ciidan ay ku soo beegmaysaa xilli sarifka lacagta adag uu hoos u dhacay maceeshadana ay halkeedii taagan tahay wallow ganacsatada ay sheegeen qiimo dhimis badan in ay ku sameeyeen dharka iyo kabaha.
SBC International Boosaaso.